1.499 Round Yakakwira Semi Yakapedzwa UC / HC
Wal-Mart Vision Center: Services, Zvigadzirwa, Zvakanakira uye Zvakaipa
Isu tinosanganisira zvigadzirwa zvatinofunga zvinobatsira kuvaverengi. Kana iwe ukatenga kuburikidza neiyi link pane ino peji, isu tinogona kuwana diki komisheni. Aya ndiwo maitiro edu. Tenga mamwe magirazi matsva mumusika? Paunenge uchitsvaga magirazi matsva, anoita kunge ari kwese kwese. Iwe unogona kunge wakatoona kuti yako yemuno W ...Verenga zvimwe »
Yakanaka mhando China Semi-Yakapedzwa / 1.56 / Imwe Vision / Photogrey / Optical Lens
Giovanni F. Akola, Franco Cardini, Domenico Del Niro, Giordano Bruno Gehry, Gennaro Margiri, Gennaro San Giuliano, Mirella Seri, Marcelo Veneziani. Da Fidel Castro a Charlie Sheen a Julio Iglesias, certuni hanno trascorso ore o ore a soddisfare, letteralmente, migliaia di donne giovani o meno gio ...Verenga zvimwe »
Kukura kwaTesla Hakusi Kufungidzira: Yayo Strategic Simba Rinoratidza Kuwedzera Kwakanyanya Kukoshesa Na2025 (NASDAQ: TSLA)
Maitiro ekukurumidza kusarudza inofambira mberi lens chiteshi?
Kukodzera kwema lens anofambira mberi kwagara kuri nyaya inopisa muiyo Optometry indasitiri. Icho chikonzero nei inofambira mberi lens yakasiyana neyechete mwenje lens ndeyekuti peya yeiri kufambira mberi lens inogona kugadzirisa dambudziko revanhu vekare vanogona kuona zvakajeka kubva kure, pakati nepedyo, iri nyore kwazvo ...Verenga zvimwe »
Haisi chete iyo photochromic lens grey, asiwo izvi ??
Mavara-ekuchinja lenzi, inozivikanwawo se "photosensitive lenses". Nekuti chemakemikari fuma yesirivha halide inowedzerwa kune iyo lens, iyo yekutanga yakajeka uye isina mavara lens ichave ine mavara lens kana iratidzwa kune yakasimba simba kuti ichengetedze, saka inokodzera ...Verenga zvimwe »
Nei kushanduka kwemavara / photochromic myopia lens kuchinja ruvara
Sezvo myopic inowanzoitika, ese marudzi eanguopio magirazi anobuda mukusingaperi, saka sei ruvara rwakachinja myopic magirazi rakave dambudziko iro munhu wese anonyanya kufarira. Nekuti discoloration myopia magirazi anotaridzika zvakanaka, saka ndiko kusarudzwa kwevakawanda vevarwere veyopiki, pazasi pekushanduka kwemyopia ...Verenga zvimwe »
Iyi ndiyo mhinduro yemutungamiri anopikisa kubhajeti | Nhau Dzemuno
Mutungamiri webato rinopikisa Kamla Persad-Bissessar nhasi aburitsa mhinduro yevanopokana neBhajeti yeMuvhuro yakapihwa negurukota rezvemari Colm Imbert. Ndinokutendai, Madam Spika, uye nekutenda dare rino nemukana wekupa mukana wekukakavadzana pagakava rechina rebhajeti rehurumende. Ndinovimba kuti mu ...Verenga zvimwe »
Zenni Komenda: Ndiani akati "kwete" kune mapaundi emadhora manomwe ekurapa magirazi?
Ini ndakapedza angangoita madhora mazana matanhatu pamagirazi ekupedzisira nemaalensi - iyo yaive mushure mekuonekwa kweinishuwarenzi yekuona. Nyaya yangu haina kujairika. Paunotenga kubva kumaketani eeziso, ezvigadzirwa zvemashopu kana kunyange maoometometri, iwo mutengo wekuwedzera wemazita mazhinji emagetsi-magirazi uye lenzi yemishonga inowanzo ...Verenga zvimwe »
Nei ini ndingakukurudzire kuti usarudze lenses yefotochromic?
1, Dual-chinangwa, dzivisa dambudziko kubvisa uye kupfeka Myopia ane refractive dhigirii ziso, muzhizha kana paine yakawanda chenguva sunscreen, akadai sunscreen kuva peya magirazi, asi kunze kana kupfeka kuonana lenses uye magirazi ezuva, neimwe nzira vasingakwanise kuona zvakajeka; Uye ...Verenga zvimwe »
Chii chaunoziva nezve "photochromic lenses"?
Zhizha rinopisa kwazvo, rinogadzirira iro zororo diki refu kuenda kunovhenekera shamwari kuti zvigoneke zvakanaka kuenda kunonakidzwa nezuva. Asi kune shamwari dzinopfeka magirazi, asi maziso photophobia, haigone kutevera moyo wekupfeka magirazi ezuva kana kuda kupfeka magirazi maviri ekutambudzika. A tarira ...Verenga zvimwe »
Nzira yekusarudza iyo chaiyo refractive index Lens yemagirazi?
1, sei kusarudza? Kana uchifananidza magirazi, kana wasvika kuzosarudza chinongedzo cheLens, Magirazi Party haarasikirwe? Hauzive Kusarudza iyo Lens. Heano maitiro ekusarudza iyo chaiyo lens kune yako degree. 2, Iyo Refractive index Iyo Refractive index ndiyo reshiyo yekupararira s ...Verenga zvimwe »
Kufumura izvo zvigadzirwa zvemalensi egirazi
Ukobvu hwemalensi mumagirazi hunokanganiswa nezvakawanda zvinhu, pakati peiyo simba remalensi ndicho chinhu chikuru. Iyo Lens ukobvu hwePamusoro Myopia wakakora kupfuura uya wepasi weMyopia. Nekudaro, kana zvasvika pakukora kwese, hupamhi hweLens hwakakoshawo, uye kusarudza furemu diki kunogona kusaina ...Verenga zvimwe »
Wal-Mart Vision Center: Services, Chigadzirwa ...
Isu tinosanganisira zvigadzirwa zvatinofunga zvinobatsira kuvaverengi. Kana iwe ukatenga kuburikidza neiyi link pane ino peji, isu tinogona kuwana diki komisheni. Aya ndiwo maitiro edu. Tenga mamwe magirazi matsva mumusika? Paunenge uchitsvaga nyowani ...
Yakanaka mhando China Semi-Yakapedzwa / 1.56 / ...
Giovanni F. Akola, Franco Cardini, Domenico Del Niro, Giordano Bruno Gehry, Gennaro Margiri, Gennaro San Giuliano, Mirella Seri, Marcelo Veneziani. Da Fidel Castro a Charlie Sheen kuna Julio Iglesias, certuni hanno trasc ...
Kukura kwaTesla Hakusi Kufungidzira: ...
Maitiro ekukurumidza kusarudza inofambira mberi lens ch ...
Kukodzera kwema lens anofambira mberi kwagara kuri nyaya inopisa muiyo Optometry indasitiri. Icho chikonzero nei inofambira mberi lens yakasiyana neyechete mwenje lens ndeyekuti peya yeiri kufambira mberi lens inogona kugadzirisa dambudziko re ...
Haisi chete iyo photochromic lens grey, b ...
Mavara-ekuchinja lenzi, inozivikanwawo se "photosensitive lenses". Nekuti kemikari fuma yesirivha halide inowedzerwa kune lens, iyo yekutanga yakajeka uye isina mavara lens ichave c ...